Thursday August 04, 2016 - 16:42:04 in Wararka by Xafiiska Muqdisho
Wasiirka Wasaarada Amniga Gudaha C/risaaq Cumar Maxamed oo ka hadlaayay amniga dalka ayaa sheegay in amaanka dalka uu yahay mid u wanaagsan balse ay jiraan siyaasiyiiin iyo dad si xun wax u fasiraaya.
Waxa uu sheegay Wasiir amniga C/risaaq Cumar Maxamed dhacdooyinkaasi amniga la xiriira Muqdisho inay kala siman tahay dunida inteeda kale oo ay ka dhacaan falal lidi ku ah dhanka ammaanka, balse aanan la oran karin in Muqdisho kaliya ay gaar u tahay amnidarada dhacda, islamarkaana siyaasiyiinta loogu baahan yahay in ay meel wanaagan ka eegaan waxyaalaha qaar.
Wasiirka Amniga ayaa difaacay shaqooyinka ay hayaan Hay’adaha ammaanka dalka, balse wuxuu sheegay inay adag tahay sida lagu celiyo ama looga hortaggo ruux doonaayo inuu qarax Ismiidaamin ah geysto oo uu dilo naftiisa.
"Masuuliyada dhanka amniga cid kasta ayeey saaran tahay ma’ahan Siyaasiyiinta qarax marka uu dhaco inay u adeegsadaan Siyaasadooda oo ay Dowladda ku dhaliilaan inay amniga wax ka qaban weydo, adiga maad wax ka qabatid amniga oo masuuliyad ayaa kaa saaran.” Ayuu yiri Wasiirka Amniga.
Marka laga yimaado hadalka wasiirka amniga Gudaha C/risaaq Cumar Maxamed Muqdisho ayaa mudooyinkiii dambe marti galinaysay qaraxyo iyo dilal loo geysanaayay Mas’uuliyiin ka tirsan dowlada soomaaliya weerarkii ugu dambeeyay ee Muqdisho ka dhacay waxaa lagu qaaday Xarunta Dambi Baarista Booliska Somaliyed ee CID-DA.